Dexpanthenol - Hello Sayarwon
အသုံးပြုခြင်း|သတိပြုရမည့်အချက်များနှင့် သတိပေးချက်များ။|Side effects|Interactions|သောက်သုံးရန်အညွှန်း
Dexpanthenol ကို မည်သည့်အကြောင်းအရာများအတွက် အသုံးပြုကြပါသလဲ။
ခြောက်သွေ့ကြမ်းတမ်းမာကြောယားယံတဲ့ အရေပြားကို ကာကွယ်ကုသဖို့ အစိုဓါတ်ထိန်းပစ္စည်း (moisturizer)အဖြစ် ဒါမှမဟုတ် အသေးစားအရေပြားပြဿနာတွေ (ဥပမာ အနှီးလောင်ခြင်း၊ဓါတ်ကင်ခြင်းကြောင့် အရေပြားအပူလောင်ခြင်း စသည်)ကို ကာကွယ်ကုသဖို့ Dexpanthenol ကို အများဆုံး အသုံးပြုပါတယ်။Emollients တွေဟာ အရေပြားကို နူးညံ့စေပြီး အစိုဓါတ်ထိန်းပေးနိုင်တဲ့အတွက် ယားယံခြင်းနဲ့ အရေပြားခြောက်သွေ့အက်ကွဲခြင်းတို့ကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ အရေပြားပြဿနာများ (ဥပမာ စိုစွတ်ခြင်း)ကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက် အချို့သော ပစ္စည်းတွေ (ဥပမာ zinc oxide, white petrolatum စသည်)ကို အများဆုံး အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။
အရေပြားရဲ့ အပေါ်ယံလွှာမှာ ရေဓါတ်ချို့တဲ့ခြင်းကြောင့် ခြောက်သွေ့တဲ့ အရေပြားကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။Emollients နဲ့ moisturizers တွေဟာ အရေပြားပေါ်မှာ အဆီလွှာတထပ်ဖြစ်ပေါ်စေတာကြောင့် ရေဓါတ်ကို အရေပြားအောက်မှာ ထိန်းပေးထားနိုင်ပါတယ်။Petrolatum, lanolin, mineral oil နဲ့dimethicone တို့ဟာ လူသုံးများတဲ့ emollients တွေ ဖြစ်ပါတယ်။Glycerin, lecithin, and propylene glycol စတဲ့ humectants တွေကတော့ အရေပြားအပြင်လွှာထဲကို ရေတွေဆွဲယူပေးခြင်းအားဖြင့် အာနိသင်ပြပါတယ်။ အရေပြားအပေါ်ယံလွှာက ဆဲလ်တွေ အတူတကွရှိနေအောင် ထိန်းသိမ်းပေးထားတဲ့ ခပ်မာမာ keratin ဓါတ်ကို ပျော့ပြောင်းသွားအောင် အဆိုပါ ပစ္စည်းတွေက လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ် (ဥပမာ ယူရီးယား၊lactic/citric/glycolic acid စတဲ့ alpha hydroxy များ၊allantoin စသည်)။၎င်းတို့ဟာ အရေပြားဆဲလ်သေတွေကို ကွာကျစေတဲ့အတွက် အရေပြားအစိုဓါတ်ကို ပိုမိုထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ပြီး နူးညံ့ချောမွေ့တဲ့အရေပြားကို ရရှိစေပါတယ်။
Dexpanthenol ကို ဘယ်လိုသုံးစွဲသင့်ပါသလဲ။
ဒီဆေးကို ညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်း သုံးစွဲပါ။ အချို့သော ဆေးတွေကို အမှန်တကယ်စတင်အသုံးမပြုမီ အနည်းငယ် စမ်းကြည့်ဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဆေးဗူးမှာပါတဲ့ အညွှန်းတွေကို အတိအကျ လိုက်နာပါ။ တကယ်လို့ ရေးထားတဲ့ အချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မသေချာဘူးဆိုရင် ဆရာဝန်ကို မေးမြန်းပါ။ အချို့ဆေးဗူး/ပုလင်းတွေဟာ အသုံးမပြုခင် ကောင်းစွာ လှုပ်ခါဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင်အသုံးပြုမယ့် ဆေးပုလင်း/ဗူးကို လှုပ်ခါဖို့ လိုမလို အညွှန်းကို သေချာစွာ ဖတ်ရှုပါ။ ပြီးရင် အလိုရှိတဲ့ အရေပြားနေရာကို (ဆေးညွှန်းမှာပါတဲ့အတိုင်း ဒါမှမဟုတ် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်း) လိမ်းပေးပါ။ သင်အသုံးပြုတဲ့ ဆေးအမျိုးအစားနဲ့ သင့်အရေပြားအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ဆေးလိမ်းရမယ့် အကြိမ်အရေအတွက် ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။ လက်အရေပြားခြောက်သွေ့ခြင်းကို ကုသဖို့အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် သင်လက်ဆေးတိုင်းမှာ သုံးစွဲဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပြီး တနေကုန်သုံးပေးနေရမှာပါ။ အနှီးလောင်ခြင်းကို ကုသဖို့ အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် အနှီး/သေးခံပတ်ပေးတဲ့ နေရာတဝိုက်ကို ဦးစွာသန့်စင်ပြီး တခါခြောက်သွေ့အောင် ပြန်သုတ်ပါ။ ပြီးမှ ဆေးလိမ်းပေးပါ။
ဓါတ်ကင်ခြင်းကြောင့် အရေပြားအပူလောင်ခြင်းကို ကုသဖို့ အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ ဓါတ်မကင်ခင်မှာ ဒီဆေးကို အသုံးပြုနိုင်ခြင်းရှိမရှိ ဓါတ်ရောင်ခြည်ဆရာဝန်ကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဆေးညွှန်းမှာဖော်ပြထားသမျှ ညွှန်ကြားချက်တွေကို အတိအကျလိုက်နာပါ။ ဒီဆေးကို အရေပြားပေါ်မှာပဲ အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပြီး မျက်လုံး၊ပါးစပ်/နှာခေါင်းအတွင်းပိုင်း၊ယောနိတဝိုက်/ပေါင်ခြံတဝိုက် အစရှိတဲ့ နူးညံ့တဲ့နေရာတွေမှာ အသုံးမပြုရပါဘူး (အဆိုပါ နေရာတွေမှာ အသုံးပြုနိုင်တယ်လို့ ဆေးညွှန်းမှာရေးထားရင် ဒါမှမဟုတ် ဆရာဝန်က ညွှန်ကြားထားရင်တော့ တမျိုးပေါ့)။ ဆေးအသုံးမပြုသင့်တဲ့ အရေပြားနေရာတွေ၊အရေပြားအမျိုးအစားတွေအကြောင်း ဆေးညွှန်းမှာ ဂရုတစိုက်ဖတ်ရှုပါ (ဥပမာ မျက်နှာ၊အရေခွံလန်/စုတ်ပြဲ/ထိရှ/ပွန်းပဲ့/ပျက်စီးနေတဲ့ အရေပြားနေရာ သို့မဟုတ် လတ်တလော အမွှေးရိတ်ထားတဲ့ အရေပြားနေရာ စသည်)။ အသေးစိတ်ထပ်မံသိရှိနိုင်ဖို့ သင့်ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
အထက်မြက်ဆုံးသော ဆေးအာနိသင်ရရှိစေဖို့အတွက် ဆေးကို ပုံမှန်အသုံးပြုဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။Moisturizers အများစု ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက် ရေ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရေချိုးပြီးခါစ သင့်အရေပြားစိုစွတ်နေချိန်မှာ ဒီဆေးတွေကို အသုံးပြုရပါမယ်။ အလွန်ခြောက်သွေ့တဲ့အရေပြားဆိုရင်တော့ ဆေးမလိမ်းခင်မှာ အရေပြားကို ရေနှူးပေးဖို့ ဆရာဝန်က ညွှန်ကြားပါလိမ့်မယ်။ ကြာရှည်စွာရေချိုး/ရေစိမ်ခြင်း၊ရေပူနဲ့ ရေချိုး/ရေစိမ်ခြင်း သို့မဟုတ် အကြိမ်ရေများများ ရေစိမ်/ရေချိုးခြင်းဟာ သင့်အရေပြားကို ပိုမိုခြောက်သွေ့စေပါလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့ သင့်အရေပြားပြဿနာ ပိုဆိုးလာရင် ဒါမှမဟုတ် မသက်သာရင် ဒါမှမဟုတ် ပြင်းထန်ဆိုးရွားတဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာတခုခုနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပြီလို့ ယူဆရင်တော့ ဆေးဝါးကုသမှုကို အမြန်ဆုံးခံယူရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Dexpanthenol ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Dexpanthenol ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Dexpanthenol ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
Dexpanthenol ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Dexpanthenol ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Dexpanthenol ကိုမသောက်သုံးခင်မှာ ဘယ်အချက်အလက်တွေကို သိထားသင့်သလဲ။
ဒီဆေးရဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ဓါတ်မတည့်ခြင်း၊အခြားဓါတ်မတည့်ခြင်းများ ရှိနေရင် စတင်မသုံးစွဲမီ ဆရာဝန်ကို ကြိုတင်အသိပေးပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီဆေးမှာပါဝင်တဲ့ ဓါတ်ပစ္စည်းတွေဟာ ဓါတ်မတည့်ခြင်း အပါအဝင် အခြားသော ပြဿနာတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ထပ်မံသိရှိနိုင်ဖို့အတွက် ဆရာဝန်ကို မေးမြန်းပါ။
အောက်ဖော်ပြပါကျန်းမာရေးပြဿနာတွေရှိနေရင် ဆရာဝန်ကို ကြိုတင်အသိပေးပါ : အရေပြားမှာ ရှရာ၊ကွဲရာများရှိခြင်း/ပိုးဝင်ခြင်း/အနာဖြစ်ခြင်း စသည်။
အချို့သော ပါဝင်ပစ္စည်းတွေ (ဥပမာ တာရှည်ခံအောင် သုံးတဲ့ဓါတ်ပစ္စည်းတွေ၊အနံ့မွှေးကြိုင်ဖို့ သုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေ)ကြောင့် သင့်အနေနဲ့ နေလောင်ဒါဏ်ကို ပိုမခံနိုင်ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်အနေနဲ့ နေပူထဲထွက်တဲ့အခါ နေလောင်ခံခရင်မ်တမျိုးမျိုး လိမ်းဖို့လိုမလားဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆေးညွှန်းကို ဖတ်ရှုပါ သို့မဟုတ် ဆရာဝန်ကို မေးမြန်းပါ။ နေပူထဲ တတ်နိုင်သမျှ မထွက်ဖို့၊နေဆာလှုံတာမျိုး မလုပ်ဖို့၊အပြင်ထွက်တဲ့အခါ နေလောင်ခံခရင်မ်လိမ်းဖို့၊အဝတ်အစားလုံလုံခြုံခြုံဝတ်ဖို့ ဆရာဝန်က ညွှန်ကြားပါလိမ့်မယ်။ အရေပြားနေလောင်တာမျိုး ဒါမှမဟုတ် အရည်ကြည်ဖုတွေထွက်လာတာ၊နီရဲလာတာမျိုးဆိုရင် ဆရာဝန်ကို ချက်ချင်းအသိပေးပါ။
အချို့သော ဆေးတံဆိပ်တွေဟာ သင့်ဝက်ခြံတွေကို ပိုဆိုးလာစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင်ဟာ ဝက်ခြံမကြာခဏထွက်တဲ့ အရေပြားပိုင်ရှင်ဖြစ်ရင် “non-comedogenic” (မွေးညင်းပေါက်များကို မပိတ်ဆို့စေပါ)စာတန်းပါ အမှတ်တံဆိပ်တွေကိုသာ ရွေးချယ်အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ထပ်မံသိရှိနိုင်ဖို့အတွက် သင့်ဆရာဝန်ကို မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ ဒီဆေးဟာ မိခင်နို့ထဲမှာ ပါဝင်လာခြင်းရှိမရှိ သေချာစွာ မသိရှိရသေးပါဘူး။ ဒါကြောင့် သင့်ရင်သွေးငယ်ကို နို့မတိုက်ခင် ဆရာဝန်ကို အရင်မေးမြန်းပါ။ အထူးသဖြင့် သင့်ရင်သားတဝိုက်မှာရှိတဲ့ အရေပြားကို ဆေးလိမ်းရတယ်ဆိုရင်ပေါ့။
Dexpanthenol က ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိနိုင်လဲ။
Emollients အများစုဟာ ယေဘုယျအားဖြင့် အာနိသင်ထက်မြက်တဲ့အပြင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလည်း အထူးအထွေ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ပူစပ်ပူလောင်ဖြစ်ခြင်း၊တဆစ်ဆစ်နာခြင်း၊နီရဲခြင်း၊ယားယံခြင်း စတာလေးတွေတော့ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ပိုဆိုးလာရင် ဒါမှမဟုတ် ကာလကြာရှည်စွာဆက်ရှိနေရင် ဆရာဝန်ကို ချက်ချင်းအသိပေးပါ။ ဆေးကပေးနိုင်တဲ့ အာနိသင်ကောင်းကျိုးတွေဟာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေထက် ပိုမိုများပြားသာလွန်တယ်လို့ သင့်ဆရာဝန်က ယူဆလို့သာ ဒီဆေးကို သုံးစွဲဖို့ ညွှန်ကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆေးကိုသုံးစွဲသူအများစုမှာတော့ ဆိုးရွားပြင်းထန်တဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်ပေါ်လေ့မရှိပါဘူး။ အောက်ဖော်ပြပါ ရှားပါးပြင်းထန်တဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ပေါ်ပေါက်လာရင် ဆရာဝန်ကို ချက်ချင်းအသိပေးပါ : အရေပြားပြဿနာများ (စိုစွတ်မှုလွန်ကဲခြင်းကြောင့် အရေပြား ဖြူဆုတ်သွားခြင်း၊ပျော့သွားခြင်း၊တွဲသွားခြင်း စသည်)၊အရေပြားပိုးဝင်ခြင်းရဲ့ လက္ခဏာများ ပေါ်ပေါက်လာခြင်း စတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆေးကြောင့် ပြင်းထန်စွာ ဓါတ်မတည့်တာမျိုးကတော့ ဖြစ်ခဲပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြင်းထန်စွာဓါတ်မတည့်ခြင်းလက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့ အနီစက်များထွက်လာခြင်း၊ယားယံရောင်ရမ်းခြင်း (အထူးသဖြင့် မျက်နှာ၊လျှာနဲ့ လည်ချောင်းတွေမှာ)၊ပြင်းထန်စွာ ငိုက်မျဉ်းခြင်း၊အသက်ရှုရခက်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်လာရင်တော့ အရေးပေါ်ဆေးဝါးကုသမှုခံယူရပါမယ်။
ဘယ်ဆေးဝါးတွေက Dexpanthenol နဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်သလဲ။
ဒီဆေးကို အသုံးပြုဖို့ သင့်ဆရာဝန်က ညွှန်ကြားတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊သင့်အရေပြားပေါ်မှာ ဆေးဝါးတမျိုးမျိုးကို အသုံးပြုတာပဲဖြစ်ဖြစ် သင်လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ဆေးဝါးတွေ (အသားအရေထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ အလှကုန်ပစ္စည်းများ အပါအဝင်)အားလုံးကို ဆရာဝန်အား အသိပေးပါ။
Dexpanthenol ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာတွေက Dexpanthenol နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ပါသလား။
Dexpanthenol က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်လိုကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေက Dexpanthenol နဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိမလဲ။
Dexpanthenol ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေမှာ Dexpanthenol ကို သောက်သုံးရမယ့်အချိုးအစားက ဘယ်လောက်လဲ။
အသေးစိတ်ထပ်မံသိရှိဖို့ သင့်ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးပါ။
ကလေးငယ်တွေမှာ Dexpanthenol ကို သောက်သုံးရမယ့်အချိုးအစားက ဘယ်လောက်လဲ။
Dexpanthenol ကို ဘယ်လိုပုံစံမျိုး အချိုးအစားမျိုးတွေနဲ့ရရှိနိုင်မလဲ။
Dexpanthenol ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Dexpanthenol ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Dexpanthenol Cream. https://www.webmd.com/drugs/2/drug-75143/dexpanthenol-topical/details. Accessed January 19, 2018.
Dexpanthenol Cream. https://www.drugs.com/cdi/dexpanthenol-cream.html. Accessed January 19, 2018.